#SorteoActiPad: Kaody promo 4 LoginBox | Vaovao IPhone
Ny fiarovana androany dia voakasiky ny antony maro ary noho izany dia tsy maintsy ampitombointsika ny fiarovana ny teny miafintsika, ny kaody hidin-tsika na maninona tsy, ny nomeraon-telefaoninay. Isan'andro dia miditra amina pejy am-polony izay nisoratra anarana taminay izahay tenimiafina sy mailaka samihafa (na farafaharatsiny mba ho ahy) ary sarotra be ny mahatadidy ireo mari-pahaizana rehetra ireo amin'ny fotoana rehetra. Androany, handinika fampiharana izay antsoina isika LoginBox de tehirizo soa aman-tsara ny teny miafintsika ary fidio amin'ny Internet iray izay nitahirizanay ny mari-pahatokisana. Amin'ny faran'ity lahatsoratra ity dia handefa azy ireo izahay Kaody promo 4 ho an'ny kinova PRO an'ny LoginBox. Te hihazona ny teny miafinao ho azo antoka ve ianao ary hiditra amin'ny tranonkalanao miaraka amin'ny fifandraisana iray?
1 Fomba fiasa LoginBox
2 Fanoratana ny angon-tsainay tsy miankina amin'ny tranonkala amin'ny fomba azo antoka
3 Ny tranonkalantsika rehetra amin'ny pejy iray
4 Ny fiarovana aloha: ny kaody pass
6 #SorteoActiPad: Kaody promo promo 4 LoginBox PRO
Fomba fiasa LoginBox
Logins mandeha ho azy: Miditra indray mandeha isika, manao LoginBox hitahiry ny taratasintsika ary rehefa te hiditra indray isika, ny fikasihana tsotsotra eo amin'ny efijery dia ho ampy hidirana ho azy ny atin'ny tranonkala; tsy mila mamerina manoratra ny solonanarana sy ny tenimiafinay.
Ny zava-drehetra azo antoka amin'ny LoginBox: Ary filaminana? Ahoana no itokisantsika ny LoginBox? Satria LoginBox dia manolotra antsika AWS Hardware nohavaozina ny encryption sy ny Passcode izay miantoka ny fiainana manokana data.
famolavolana: Tranonkala maro no mitovy amin'izany, saingy miaraka amin'ity rindranasa ity dia hanana ny tranokala voasoratra miaraka amin'ny sary kely izy ireo ka rehefa te hiditra dia mila tsindrio fotsiny ilay sary kely an'ny tranonkala tadiavina.
Browser: LoginBox dia manana mpizaha anaty izay hivoahantsika soa aman-tsara. Izy io dia manana efijery feno sy baraovana azo afindra, hametrahana azy eo amin'ny toerana tsy dia manelingelina antsika.
Fanoratana ny angon-tsainay tsy miankina amin'ny tranonkala amin'ny fomba azo antoka
Ny tanjon'ny LoginBox dia ny fitehirizana soa aman-tsara ny antontan-taratasintsika sy fidirana eo noho eo ary ho azy eo amin'ny Internet; fa noho izany dia tsy maintsy manana fisoratana anarana fidirana amin'ny teny miafina isika. Hanao fisoratana anarana amin'ny LoginBox izahay.
Tsindrio ny + izay eo amin'ny ilany ankavanana ambony ary ampidirinay ny navigateur tafiditra. Miditra amin'ny tranonkala izay tadiavinay LoginBox hitahiry ho anay.
Rehefa tafiditra ao anaty tranonkala isika dia miditra tahaka ny fanaontsika foana; mampiditra ny solonanarana sy tenimiafinay.
Ao amin'ny faritra havia havia amin'ny browser dia mahita kianja mena kely isika. Rehefa ao anaty tranonkala isika, kitiho ary azontsika atao ny manova ny sary kely izay ho hitantsika eo amin'ny efijery LoginBox lehibe. Raha vantany vao voafidy ilay sary kely dia tsindrio ny «Save».
Ny tranonkalantsika rehetra amin'ny pejy iray
Rehefa vitantsika ny manamarina ny tenantsika amin'ireo tranonkala rehetra ilaintsika, dia afaka miditra amin'ny efijery lehibe isika amin'ny fanidiana ny navigateur cross izay eo amin'ny ilany ankavanana ambony. Hiditra amin'ny toerana toa ilay eo amin'ny sary eo ambony isika.
Ao amin'ity efijery lehibe ity dia manana ny sary kely rehetra momba ny tranonkala izay nosoratanay tamin'ny LoginBox. HO AN'NY tongava miditra amin'ny tranonkala irayNy sisa ataonao dia ny tsindrio ny sary kely. Hiditra ho azy tsy misy hidirantsika amin'ny teny miafinao intsony isika. Mahaliana, sa tsy izany?
Ny fiarovana aloha: ny kaody pass
Ny iPad-antsika dia mety ho eo am-pelatanan'ny olona maro ary raha manana LoginBox napetraka isika dia tokony hitandrina tsara satria misy mahita ny mpampiasa sy ny teny miafina nosoratantsika. Ahoana no hamahantsika an'io olana io? Manampy kaody passcode, izany hoe isaky ny miditra LoginBox isika dia tsy maintsy mampiditra kaody.
Miditra ny Fikirana, hita any ankavia havia
Tsindrio izahay «pass code»Ary mampahafantatra ny kaody tadiavinay izahay (mety ho isa na alphanumeric)
Raha vantany vao manidy ny fampiharana izahay ary manokatra azy io, dia hanontany antsika ny kaody niditra isika.
Raha mila misoratra anarana tranokala bebe kokoa isika ary tsy manana toerana miaraka amin'ny LoginBox, dia afaka mividy LoginBox PRO (izay manolotra fiasa vaovao maro hafa). Eto ambany eto isika dia mandefa kaody 4 amin'ity kinova ity.
LoginBox Pro€ 8,99
#SorteoActiPad: Kaody promo promo 4 LoginBox PRO
Manome antsika ny mpamorona Lisansa 4 LoginBox PRO mba homena ny mpamaky antsika rehetra ary ho an'ity:
Tsy maintsy nanome ianao +1 amin'ity lahatsoratra ity
Araho ny iPad News ao amin'ny Google+
Avela a fanehoan-kevitra ato amin'ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny anarana anananao ao amin'ny Google+
Manana hatramin'ny Alatsinainy 30 amin'ity volana ity handray anjara. Mirary anao ho tsara vintana!
FANAMARIHANA!: Ny mpandresy dia tsy maintsy mamaly ny hafatra halefanay ao anatin'ny 4 andro fiasana na hafa, averina ny sary mandra-pahatongan'ny valiny.
Fanazavana fanampiny - Ahoana no hitahirizako ny iPad?: Kaody sy hidy fehezan-dalàna
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » #SorteoActiPad: Kaody promo 4 LoginBox
Misaotra tamin'ny fanomezana sy ny fialantsasatra sambatra!
Rafael Carrasco Fuentes dia hoy izy:
Fampiharana mahavariana. Ny anarako amin'ny G + dia Rafael Carrasco Fuentes
Valiny tamin'i Rafael Carrasco Fuentes
Jose Antonio Rodriguez Pichard dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha misy vintana, ny anarako: José Antonio Rodríguez Pichardo.
Valiny tamin'i Jose Antonio Rodríguez Pichard
Alma Alanís dia hoy izy:
Ny anarako dia Alma Alanís García.
Mamaly an'i Almà Alanís
Lauryncorr dia hoy izy:
Lauryn Corr no anarako. Ny interface sy izay atolotray dia tsara lavitra noho ny 1password. Mbola sarobidy kokoa noho ny vola !!
Valiny tamin'i Lauryncorr
Gi-We Chu Jan dia hoy izy:
Mampiasa OneKey aho ary ny marina dia tsara kokoa ity app ity. Misy fisalasalana ve, ho an'ny iPad ve ny fampiharana sa ho an'ny iPad ihany?
Mirary soa ho an'ny rehetra ary mirary fety sambatra !!!
Ny anarako amin'ny G + dia Gi-We Chu Jan
Valiny tamin'i Gi-We Chu Jan
rodrigo hdz dia hoy izy:
Ao amin'ny Google+ Rodrigo hdz
Valio i rodrigo hdz
Merry Noely ary misaotra anao amin'ny zavatra rehetra
Mirary krismasy sambatra ho anao aho
Valiny amin'i JUANLU
Quintus CP dia hoy izy:
Valiny amin'ny Quintus CP
Mamaly an'i kocx
Rafael Montes dia hoy izy:
Toa tsara be! Rafael Montes
Valiny tamin'i Rafael Montes
Aleksey Nima Urbina dia hoy izy:
Miarahaba antsika rehetra noho ny fanatsarana ny filaminana
Valiny tamin'i Aleksey Nima Urbina
Javier Quiles dia hoy izy:
Valiny amin'i Javier Quiles
Juan Carlos de Pablo dia hoy izy:
Valiny tamin'i Juan Carlos de Pablo
Oscar Espinoza dia hoy izy:
Fampiharana tena tsara ny anarako ao amin'ny Google+ dia Oscar Espinoz
Mamaly an'i Óscar Espinoza
charlycam dia hoy izy:
Toa tsara izany, andramantsika izany, hahitantsika raha tsara vintana isika !!!! charlycam
Mamaly amin'ny charlycam
Zafikely Hugo dia hoy izy:
Toa tsara izany, ny anarako ao amin'ny Google + dia zafikelin'i Hugo
Mamaly an'i Hugo nieto
FlipControlCenter: ampanjifaina ny bokotra Control Center (Cydia)